RAHARAHA VOLAMENA 73,5KG : Indianina sy Malagasy iray, nanampy ireo 7 efa nidoboka eny Tsiafahy – Free News
Hanamafy ny ady amin'ny kolikoly ity tolo-dalàna ity, hoy ny fanazavana.
Accueil/Politika/RAHARAHA VOLAMENA 73,5KG : Indianina sy Malagasy iray, nanampy ireo 7 efa nidoboka eny Tsiafahy
Tamin’ny alalan’ny fanadihadiana ireo olona rehetra nifandray sy nifanerasera tamin’ireo olona dimy voalohany voarohirohy tamin’ny raharaha fanondranana an-tsokosoko volamena milanja 73,5Kg no nahafaha-nahita ireo olona roa, teratany indianina sy Malagasy iray, izay niray tsikombakomba tamin’izy ireo koa. Niakatra teny anivon’ny PAC, omaly, izy ireo. Ary nidoboka eny Tsiafahy avy hatrany nanampy isa ireo olona fito efa nalefa teny.
Lucien R. 14 janvier 2021
Tsy mijanona fa mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika ilay raharaha fahatrarana volamena milanja 73,5Kg tatsy Afrika Atsimo. Araka ny vaovao farany voaray avy eo anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly, olona roa vaovao indray no fantatra fa naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy taorian’ny fakana am-bavany natao azy ireo, omaly, 13 Janoary 2021. Tafiditra ao anatin’izany i Herintsaina Anny Joachin, izay anisany ireo efa mpiondrana an-tsokosoko ihany koa, ary voasaringotra amin’ity raharaha fanondranana volamena an-tsokosoko tratra tao Afrika Atsimo ity. Olona faharoa kosa, ilay teratany Indianina iray antsoina hoe Kanutilal Sanath dit Sandip, izay nitana ny andraikitry ny irakiraka, sady mpandray ny bolongam-bolamena avy amin’ny teratany malagasy iray antsoina hoe Andriafiandrianana Amstrong izay mipetraka ao Mahavoky Besarety au lot II M 36. Ity farany izay mbola karohin’ny Fitsarana amin’izao fotoana izao. Ny loharanom-baovao marim-pototra no nahafantarana fa anisan’ireo nifandray tamin’ireo telo lahy voatazona any Afrika Atsimo ireto olona vao naiditra am-ponja ireo.
Tafiakatra 10 ireo efa nidoboka am-ponja
Raha tsiahivina, olona miisa valo no efa naiditra am-ponja vonjimaika teny Tsiafahy sy Antanimora mahakasika ity raharaha volamena 73,5Kg ity. Anisan’izany ny tomponandraikitra ambony iray eo anivon’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM), ny avy amin’ilay Kaompaniam-pitaterana tsy miankina « STA » izay voalaza fa miisa telo, ireo olona miisa roa izay anisan’ireo olona telo nikasa hanondrana ireo volamena tany Afrika Atsimo, izay ahitana olona telo mbola voatana any an-toerana, ary ny roa voasambotra teto an-tanindrazana. Farany, ireo mpanamory miisa roa. Hatreto izany, mitotaly folo ireo efa nidoboka am-ponja tamin’ity raharaha ity. Amin’ny maha raharaha fanondranana antsokosoko avo lenta azy anefa, mbola maro ireo olona andalam-pikarohana amin’izao fotoana.
Olona fito karohin’ny PAC
Olona folo ankehitriny no tokony mbola handalo hanaovana fanadihadiana eo anivon’ny Pac, na ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly. Ny telo amin’ireo dia ireo teratany malagasy taraiky ao Afrika Atsimo ankehitriny. Mbola karohina kosa ireo olona fito hafa eto an-toerana amin’izao fotoana. Tafiditra ao anatin’ireo olona fito ireo ny voalaza fa tompon’ilay volamena, eo ihany koa ny olona nitrandraka volamena an-tsokosoko ary olona manana fahefana ka nampiasa izany tamin’ny fomba tsy ara-dalàna.
FANABEAZANA TSARA KALITAO : Ho ampiasana ny teknolojia vaovao eny amin’ireo sekolim-panjakana
FIDIOVANA MANDRITRA NY FADIMBOLANA : Mbola sakana ny tsy fahampian’ny fanentanana sy ny toeram-pidiovana
TSY FANJARIAN-TSAKAFO ANY ATSIMO: Efa misy fepetra raisin’ny Fanjakana
VOAFONJA AO ANTANIMORA : Tanora tsy ampy taona miisa 18 sy vehivavy 30 isa nahazo fiofanana